1220mm PC Pee eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe - China Qingdao Hegu Wood-Plastic
PC / Pee / eyi oghere Grid efere extrusion Line, eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe, eyi ejima mgbidi mpempe akwụkwọ Ndinam igwe, eyi mbukota igbe mmepụta akara, eyi corrugatd s ...
Nzipu Port: Qingdao Port, China
Product ihe: eyi Pee PC ihe
Product obosara: 1220mm
Product ọkpụrụkpụ: 2-8mm
Ike oriri: 200KW
PC / Pee / eyi oghere Grid efere extrusion Line, eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe , eyi ejima mgbidi mpempe akwụkwọ Ndinam igwe, eyi mbukota igbe mmepụta akara, eyi corrugatd mpempe akwụkwọ Ndinam igwe
Nke a eyi oghere mpempe akwụkwọ mmepụta akara ọfiọkde na-aga n'ihu mmepụta nke PC / Pee / eyi oghere okporo efere, nke bụ na ọdabara na-ewu mma, advertisement collocation, na ụzụ mkpuchi nke okporo ụzọ nakwa dị ka nkwakọ. Pee / eyi oghere okporo efere bụ ezigbo dochie anya akwụkwọ igbe na-eme nkwakọ ngwaahịa igbe. Ọ bụ ìhè arọ, akwa siri, dam na-àmà, na mgbochi corrosion. The obosara nke ngwaahịa bụ 1220-2100 mm, na ọkpụrụkpụ bụ 2 mm-12 mm.
Machine foto n'ihi na eyi oghere mpempe akwụkwọ extrusion akara:
1,Material mixing silo for eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe : it is used for mixing PP material with filling masterbatch and color masterbatch
2, Extruder maka eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe: The akpan iji ịghasa na elu-achịkwa usoro hụ magburu onwe palatalization, elu mmepụta na ike extruding.
ma ọ bụrụ na ahịa chọrọ iji recyle ihe onwunwe, anyị na-ike itinye co-extrusion akara nke na-eme abụọ oyi akwa eyi oghere mpempe akwụkwọ, n'ime oyi akwa nwere ike iji recycled eyi ihe onwunwe, na elu oyi akwa nwere ike iji ọhụrụ eyi ihe onwunwe.
3, ịnwụ isi na ebu maka eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe: anyị nwere ike itinye ndị na-anwụ isi
Screen changer maka eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe : Ndenye ihuenyo changer nke haịdrọlik usoro ana achi achi obere N'ezie nke ihuenyo mgbanwe. Ugboro abụọ ọnọdụ jikọtara na pụrụ iche akara Ọdịdị ekwe nkwa anụ ọrụ na ihuenyo changer.
Ebu: ebu adopts elu-edu alloy nchara na throttling ngwaọrụ iji hụ na ọbụna mgbali nke oriri influent na ebu ọnụ, na-esi ihe nke elu-ala mpempe nkwa ọbụna ọkpụrụkpụ nke efere.
Agụụ calibrating table maka eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe: kpo oku inyerịta na obi jụrụ usoro ngwa ngwa ọsọ na calibrating usoro ọzọ ihe n'ụzọ dị irè na nkịtị na agụụ usoro, nke ana achi achi calibrating nkenke. Agụụ usoro composes abụọ nọọrọ onwe ha subsystems na onye ọ bụla a kwadebere n'ụzọ na ọtụtụ ofu ekesa agụụ edoghi nke atọ mgbe ụdị. Ka ọ dịgodị, onye ọ bụla akara eburu agụụ nduzi usoro na agụụ ngosi usoro na-aghọta ọbụna na ike agụụ ogo efere n'elu.
Traktọ maka eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe : E nwere ihe abụọ traktọ. Onye mbụ bụ na elu ike, elu Mbelata ruru, multi-ala ụdị, ọma ala-ọsọ ọrụ, elu traction na bụ ike isere efere si calibrating table evenly na synchronous. The abụọ na otu onye bụ iji wepu nchegbu, na na mgbakwunye na ọ na-onwem na ihu-ọnwụ ngwaọrụ iji hụ na nti obosara-eji ire ụtọ ịkpụ nke n'ọnụ.
Nchegbu remover maka eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe : The elu nnukwu ebe conductive kpo oku mode nwere ike n'ụzọ dị irè-ewepụ nchegbu nke efere na n'ihu mma n'ụzọ doro anya nke efere.
Ịcha igwe eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe: Ezi ozugbo ogologo-ofu ọnwụ na akpaka elu-ala ịrụzu usoro jikọtara na alloy ígwè nkọ agụba aghọta elu àgwà nke ọnwụ.
Final ngwaahịa na ngwa mere eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe:
Previous: Plastic imegharị ihe maka iji igwe PITA karama imegharị ihe maka iji igwe
Next: Plastic profaịlụ igwe UPVC profaịlụ igwe
corrugated Plastic mpempe akwụkwọ Ime Machine
abụọ oyi akwa p mpempe akwụkwọ igwe
pc oghere mpempe akwụkwọ igwe
pc ụlọ akwụkwọ igwe
Pee oghere mpempe akwụkwọ igwe
Pee ụlọ akwụkwọ igwe
Plastic Box Ime Machine
Plastic afụ mpempe akwụkwọ Ime Machine
Plastic corrugated mpempe akwụkwọ Machine
Plastic ụlọ akwụkwọ Ime Machine
Plastic mpempe akwụkwọ nhicha Machine
Plastic mpempe akwụkwọ mkpuchi Machine
Plastic mpempe akwụkwọ na-agụta Machine
Plastic mpempe akwụkwọ Cutting Machine
Plastic mpempe akwụkwọ Ịcha Machine Manufacturers
Plastic mpempe akwụkwọ Embossing Machine
Plastic mpempe akwụkwọ na-akanye Machine
Plastic mpempe akwụkwọ egweri Machine
Plastic mpempe akwụkwọ Lamination Machine
Plastic mpempe akwụkwọ Ime Machine Price
Plastic mpempe akwụkwọ Ime Machine Qingdao
Plastic mpempe akwụkwọ Manufacturing Machine
Plastic mpempe akwụkwọ Nkedo Machine
p corrugated mpempe akwụkwọ extrusion akara
p okporo mpempe akwụkwọ igwe
p oghere mpempe akwụkwọ extrusion akara
eyi oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe
Eyi oghere mpempe akwụkwọ n'ichepụta igwe
p mbukota igbe Ndinam igwe
p mbukota mpempe akwụkwọ Ndinam igwe
p pallet mpempe akwụkwọ Ndinam igwe
p Pee Pc oghere Grid mpempe akwụkwọ Ime Machine
p ụlọ akwụkwọ igwe
p mpempe akwụkwọ igwe
p ejima mgbidi mpempe akwụkwọ Ndinam igwe
ịkwanyere Flex Banner mpempe akwụkwọ Mfg. Machine
ịkwanyere -eṅomi marble mpempe akwụkwọ Machine
ịkwanyere -eṅomi marble mpempe akwụkwọ Ime Machine
ịkwanyere Roll Iji mpempe akwụkwọ Cutting Machine
ịkwanyere gbamgbam Ime Machines
ịkwanyere Now mpempe akwụkwọ Machine
ịkwanyere mpempe akwụkwọ mkpuchi Machine
ịkwanyere mpempe akwụkwọ Ime Machine Price
2500mm Pee PC eyi corrugated mpempe akwụkwọ igwe
1700mm Pee PC eyi ejima mgbidi mpempe akwụkwọ Ndinam igwe
Eyi igbe Ndinam igwe
2100mm Pee eyi mbukota mpempe akwụkwọ mmepụta akara
1100mm eyi PC Pee oghere mpempe akwụkwọ Ndinam igwe